Sakarya မင်္ဂလာသတင်းအတွက်ပြည်သူ့ဘတ်စ်ကား Tradesmen - rayhab ဖြစ်ပါသည်
HomeတူရကီMarmara ဒေသကြီး54 SakaryaSakarya မင်္ဂလာသတင်းအတွက်ပြည်သူ့ဘတ်စ်ကား Tradesmen
Sakarya မင်္ဂလာသတင်းအတွက်ပြည်သူ့ဘတ်စ်ကား Tradesmen
11 / 08 / 2019 Levent Elmastaş 54 Sakarya, အထွေထွေ, လမ်းမကြီး, ဘီးစနစ်များ, Marmara ဒေသကြီး, တူရကီ 0
esnafi Fast ကူးတို့၏လူ sakaryada ပျော်ရွှင်သတင်း
လစဉ်ဝင်ငွေထောက်ခံမှုအခမဲ့အထူးအများပြည်သူဘတ်စ်ကားခရီးသွားကုန်သွယ်ရေးအပေါ်ပိုက်ဆံဖန်ဆင်း 2019 ဇွန်လအတွက်ဆက်လက်။ ဤအခြေအနေတွင်များတွင်အရောင်းအသို့မဟုတ်အကောင့် 690 တထောင်တန်ဖိုးရှိထောက်ခံပါတယ်။
ပုဂ္ဂလိကဘတ်စ်ကားဖွငျ့ Sakarya တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဦးစီးဌာနသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဦးစီးဌာနလစဉ်ဝင်ငွေထောက်ခံမှုငွေပေးချေမှုအရောင်းဆက်လက်အခမဲ့ပိုက်ဆံခရီးသွားလာ။ ဤအခြေအနေတွင်ပြောနေကြပါတယ်ပြည်သူ့ပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှအဆိုပါ 2019 ကျနော်တို့ငွေပေးချေ၏ဇွန်လ 2019 တထောင်တန်ဖိုးရှိဖုံးအုပ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့သိမ်းသွားလေ၏ 690 ပြီးစီးခဲ့ကြသည်အခမဲ့ခရီးသွားလာပိုက်ဆံဖန်ဆင်းသောဇွန်လ "ပုဂ္ဂလိကဘတ်စ်ကားများ၏အရောင်းအငွေပေးချေ၏အကောင့်ရယူပါ။ ပိုကောင်းတဲ့ "အသုံးအနှုနျးမြားအသုံးပြုခဲ့ကြသည်ကိုရယူပါ။
Sakarya ပြည်သူ့ဘတ်စ်ကား Tradesmen မင်္ဂလာသတင်း 21 / 04 / 2017 Sakarya ပြည်သူ့ဘတ်စ်ကား Tradesmen မင်္ဂလာသတင်း: Sakarya တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဦးစီးဌာနညွှန်ကြားရေးမှူး Fatih pistil အခမဲ့အရောင်းအခရီးသွားလာပုဂ္ဂလိကဘတ်စ်ကားပိုက်ဆံကသူတို့လစဉ်ဝင်ငွေထောက်ခံမှုငွေပေးချေမှုဆက်လက်လုပ်ကြောင်းကြေညာခဲ့သည်။ Pistil, သန်းဖေဖော်ဝါရီလနှင့်မတ်လများတွင်ပေးဆောင်ခဲ့သည် 2017 "ဇန်နဝါရီလ 1 နှစ်ပေါင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့သိမ်းသွားလေ၏ကိုထောကျပံ့ TL တထောင် 167 ပိုင်။ ပိုကောင်းရ, "ဟု၎င်းကပြောသည်။ Sakarya တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဦးစီးဌာနညွှန်ကြားရေးမှူး Fatih pistil အခမဲ့အရောင်းအခရီးသွားလာပုဂ္ဂလိကဘတ်စ်ကားပိုက်ဆံကသူတို့လစဉ်ဝင်ငွေထောက်ခံမှုငွေပေးချေမှုဆက်လက်လုပ်ကြောင်းကြေညာခဲ့သည်။ Fatih pistil, "လစဉ်ဝင်ငွေထောက်ခံမှုငွေပေးချေမှုအဖြစ်အထူးပြည်သူ့ဘတ်စ်ကား tradesmen ကျွန်တော်တို့ရဲ့အခမဲ့ခရီးသွားလာပိုက်ဆံဆက်လက်ပါလိမ့်မယ်။ ယင်းကိစ္စနှင့်စပ်လျဉ်း ...
Sakaryada အများပြည်သူဘတ်စ်ကား tradesmen ကောင်းသောသတင်း 14 / 02 / 2017 Sakaryada အများပြည်သူဘတ်စ်ကား tradesmen ကောင်းသောသတင်း: Sakarya တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဦးစီးဌာနညွှန်ကြားရေးမှူး Fatih pistil အခမဲ့အရောင်းအခရီးသွားလာပုဂ္ဂလိကဘတ်စ်ကားပိုက်ဆံကသူတို့လစဉ်ဝင်ငွေထောက်ခံမှုငွေပေးချေမှုဆက်လက်လုပ်ကြောင်းကြေညာခဲ့သည်။ စက်တင်ဘာလအတွင်း Pistil "533 တထောင်ပေါင်နှင့်အောက်တိုဘာလကျွန်တော်တို့ရဲ့ tradesmen ဖို့ထောက်ခံမှုအကောင့်ရောက်ရှိခဲ့သည်။ ပိုကောင်းရ, "ဟု၎င်းကပြောသည်။ Sakarya တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဦးစီးဌာနညွှန်ကြားရေးမှူး Fatih pistil အခမဲ့အရောင်းအခရီးသွားလာပုဂ္ဂလိကဘတ်စ်ကားပိုက်ဆံကသူတို့လစဉ်ဝင်ငွေထောက်ခံမှုငွေပေးချေမှုဆက်လက်လုပ်ကြောင်းကြေညာခဲ့သည်။ လစဉ်ဝင်ငွေထောက်ခံမှုငွေပေးချေမှုအဖြစ်ဘာသာရပ်အပေါ်မှတ်ချက်များအတွက် Pistil, "အထူးပြည်သူ့ဘတ်စ်ကား tradesmen ကျွန်တော်တို့ရဲ့အခမဲ့ခရီးသွားလာပိုက်ဆံဆက်လက်ပါလိမ့်မယ်။ ယင်းကိစ္စနှင့်စပ်လျဉ်း ...
အထူးပြည်သူ့ဘတ်စ်ကားလက်မှုပညာသည်စာရွက်စာတမ်း Accessibility 31 / 10 / 2017 Arifiye Sapanca နှင့်စာရွက်စာတမ်း Accessibility ဦးစီးဌာနတို့ကမသန်စွမ်းနိုင်ငံသားများအသုံးပြုရန်ကားသင့်လျော်သောမြို့တော်မြူနီစီပယ်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဦးစီးဌာန, ပုဂ္ဂလိကဘတ်စ်ကားအားပေးပြီးမှခဲ့သည်။ Pistil, "ငါသည်ဤ sensitivity ကိုများအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏လက်သမားနည်းမနောသရုပ်ပြထားပါတယ်" ဟု၎င်းကဆိုသည်။ Arifiye Sapanca နှင့်စာရွက်စာတမ်း Accessibility ဦးစီးဌာနတို့ကမသန်စွမ်းနိုင်ငံသားများအသုံးပြုရန်ကားသင့်လျော်သော Sakarya တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဦးစီးဌာန, ပုဂ္ဂလိကဘတ်စ်ကားအားပေးပြီးမှခဲ့သည်။ နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန် Fatih pistil သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဦးစီးဌာနမှတင်ပြစာရွက်စာတမ်းခုနှစ်တွင်, လူမှုရေးန်ဆောင်မှုများဦးစီးဌာနဌာနမှူးဒါဝိဒ်သည်အနန္တတန်ခိုးရှင်, မိသားစုနှင့်လူမှုဆိုင်ရာမူဝါဒ၏ပြည်နယ်ညွှန်ကြားရေးမှူးနှင့်အတူပျော်ရွှင်ကားတစ်စီးပိုင်ရှင်များအတွက်အလင်းမရှိရာအရပ်ကိုယူခဲ့ပါတယ်။ သူတို့က, စာရွက်စာတမ်းများသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဦးစီးဌာနကိုသမ္မတ Fatih pistil ခံယူ ...
ဓါတ်ရထားအရောင်းအပြီးနေကြတယ်, Akdeniz နစ်မြုပ်ကုန်သွယ်မှု 11 / 07 / 2016 ဓါတ်ရထားဈေးရောင်းအရောင်းနစ်မြုပ်, Akdeniz ပြီးသွား: ကြောင့်ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောလမ်းရထား၏ Izmit Yahya Kaptan, Akdeniz နှင့် Mehmet လီ Pasha ဒါကြောင့်စကားပြောဆိုရန် Mahal အတွက်အလုပ်လုပ်တယ် Izmit ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောလမ်းရထား၏အများဆုံးနာကျင်ဖြစ်စဉ်ကို Akdeniz နှင့် Mehmet လီအလုပ်လုပ်တယ်ခဏ "လက်သမား bleeds" Pasha ရပ်ကွက်အတွင်းဈေးရောင်းနေထိုင်ပါတယ်။ တိုးတက်မှုနှုန်းဿွာန်ကြွလာနှင့်အတူအလုပ်Yenişehirရပ်ကွက်ကုန်သွယ်မှုနှင့် Mehmet လီ Pasha ထို့ကြောင့်အလုပ်သူတို့လုနီးပါးအဓိကရုဏ်းသူတို့မတတျနိုငျသောကွောငျ့ရပ်ကွက်တလျှောက် Mustafa Kemal Boulevard ၏ဘဝရပ်တန့်ခဲ့ကြပါတယ်။ မျှော်လင့်ကြောင်း, ဒါပေမယ့်မျှော်လင့်ပါတယ်မယ်လို့ရှာတွေ့ဖို့မအောင်မြင်ဘူး ငါ၏အပြောဆိုမှုများဆီးရီးယားအဖြစ်ကြုံတွေ့အဖြစ်လမ်းကဒီမှာမြင်ကြပုံရိပ်တွေ၏ဘာသာစကားကိုအတွက်ကုန်သွယ်မှု။ ဒီနည်းကို Hanks İZMITအတွက် ...
ပြည်သူ့ဘတ်စ်ကား Bursa အတွက်လမ်းရထားနှင့်အတူစုဝေးရောက်လာကြ၏ 22 / 04 / 2014 ပေါ်လာတာဟာအရင်တွေနဲ့ပြည်သူ့ဘတ်စ်ကားခံတွင်းမှယူဆောင်yürükleri Bursa, လမ်းရထား, ဘတ်စ်ကားတိုက်မှုများတွင် Bursa အတွက်စုဝေးရောက်လာကြ၏။ ဓါတ်ရထားနှင့်ဘတ်စ်ကားခရီးသည်စျေးပေါပေါ်မတော်တဆအသက်ရှင်ကျန်ရစ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါမတော်တဆမှု Ataturk ရိပ်သာလမ်းမှာဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ မစ္စတာ 16 00348 ပန်းကန်အထူးအများပြည်သူဘတ်စ်ကားကိုဒေါင်းလုဒ်လုပ်ရန်ခရီးသည်စတင်မယ့်မှတ်တိုင်ချဉ်းကပ်ခဲ့ပါတယ်။ နောက်ပိုင်းတွင်သူ Silkworm နှင့်အတူတိုက်မိတူညီတဲ့ဦးတည်ချက်ကနေလာမယ့်, ဘတ်စ်ကားစွန့်ခွာလို။ ကံကောင်းထောက်မစွာ, သူမတော်တဆမှုသေဆုံးခဲ့ခြင်းနှင့်ဒဏ်ရာရသူမဟုတ်ခဲ့ပေ။ ခရီးသည်အလွန်ကြောက်လန့လမ်းရထားနှင့်ဘတ်စ်ကား၌နေ၏။ ရဲတပ်ဖွဲ့မတော်တဆမှုနှင့်ဆက်စပ်သောအနေနဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုစတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။
ပြည်သူ့ဘတ်စ်ကားဒဏ်ရာရနေတဲ့ရထားလမ်းမော်တော်ယာဉ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု9ဝင်တိုက်ခဲ့သည် 09 / 12 / 2014 ပြည်သူ့ဘတ်စ်ကားဒဏ်ရာရနေတဲ့ရထားလမ်းမော်တော်ယာဉ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု9ဝင်တိုက်ခဲ့သည်: ရထား၏လမ်းကြောင်းအတွက် Nigde-Nevsehir လမ်းလမ်းဆုံလူတွေဒဏ်ရာရရှိ9အများပြည်သူဘတ်စ်ကားပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု tool ကိုတာမျိုး။ ကလူဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့သည်9ရထားလမ်းပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုမော်တော်ယာဉ်တိုက်မှုနှင့်အတူလမ်းဆုံမှာလမ်းအများပြည်သူဘတ်စ်ကားလေ့ကျင့်ချင်သောသူ Nigde-Nevsehir လမ်း။ ခရီးသည်အက်စ် Y. တင်ဆောင်လာသောနံနက်ယံ၌အစီရင်ခံစာများအဆိုအရ Nigde Yıldıztepeမြို့စင်တာ ဟူ Nigde-Nevsehir လမ်းလမ်းဆုံအဆိုပါရထားလမ်းကိုတစ်ဦးပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုမော်တော်ယာဉ်နှင့်အတူတိုက်မိ 51 529 လင်ပန်းအများပြည်သူဘတ်စ်ကားဦးဆောင်ခဲ့သည်။ လမ်းဘေး Impactor ဘတ်စ်ကား HG (18), AE (32), S.D. အတွက်ခရီးသည်များ၏လူဦး (56), RA (31), MK ...
အထူးပြည်သူ့ဘတ်စ်ကားယာဉ်မောင်းသင်တန်းဟာBURULAŞပေး 31 / 03 / 2015 အထူးပြည်သူ့ဘတ်စ်ကားယာဉ်မောင်းသင်တန်းဟာBURULAŞကိုပေးသနား: အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးန်ဆောင်မှုများ၏အရည်အသွေးမြှင်၏ရည်ရွယ်ချက်နှင့်အတူ ပူးပေါင်း. စတင်ပုဂ္ဂလိကပြည်သူ့ဘတ်စ်ကားလုပ်ငန်းရှင်များအထူးအများပြည်သူဘတ်စ်ကားမောင်းသူလေ့ကျင့်ရေးအားထုတ်မှုများ၏BURULAŞနှင့် Bursa ကုန်သည်ကြီးများ။ Bursa ဘို့ငါးရက်တစ်ပါတ်သင်တန်းပေးပုဂ္ဂလိကဘတ်စ်ကားများ၏အရည်အသွေးနှင့်ဘုံစံချိန်စံညွှန်းများပြဋ္ဌာန်းချက်တိုးတက်စေရန်ဒေသခံအများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးန်ဆောင်မှုအတွက်အရေးပါသောနေရာအရပ်ကိုင်ထားနေဆဲဖြစ်သည်။ Ugur နည်းပြ, ခရီးသည်ဆက်သွယ်ရေးနှင့်အပြုအမူများကပေးသောပြည်သူ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးပညာရေးကျွမ်းကျင်သူ Image ကိုစီမံခန့်ခွဲမှုလေ့ကျင့်ရေး, ယာဉ်အသွားအလာဒေါသနှင့်စိတ်ဖိစီးမှုစီမံခန့်ခွဲမှု, ပြည်သူ့ပို့ဆောင်ရေးစည်းကမ်းများ, စီးပွားရေးနှင့်ထိုကဲ့သို့သောလူမှုရေးဘဝကလက်ကျန်ငွေအဖြစ်ခေါင်းစဉ်တစ်ခုအပြန်အလှန်လမ်းအတွက်လုပ်ငန်းများ၌ဖြစ်ပါတယ်။ ...
Eskişehirအတွက်ဓါတ်ရထားဘတ်စ်ကား Collider နှင့်အတူပြည်သူ့ 1 (ဗီဒီယို) ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့သည် 14 / 03 / 2016 Eskişehirအတွက်ဓါတ်ရထားဘတ်စ်ကား Collider နှင့်အတူပြည်သူ့ 1 ကလူဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့သည် 1 Eskisehir အတွက်အသွားအလာမတော်တဆမှုအတွက်အလုပ်နေရာချထား, အသေးစိတ်ကနေဘတ်စ်ကားနဲ့ပေါ်လာတာဟာအရင်, ပုဂ္ဂလိကဘတ်စ်ကားနှင့်ပေါ်လာတာဟာအရင်များ၏တိုက်မှုနှင့်အတူပြန်လမ်းကြောင်းပေါ်တွင်လမ်းရထားမထွက် Ray ဒဏ်ရာရရှိခဲ့သည်။ Eskisehir, ပုဂ္ဂလိကဘတ်စ်ကားနှင့်ပေါ်လာတာဟာအရင်များ၏တိုက်မှုအသေးစိတ်ကလူဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့သည် 1 ကြောင်းဘတ်စ်ကားများနှင့်လမ်းရထားမတော်တဆမှု။ ရရှိသောသတင်းအချက်အလက်များအရ, Ekrem Y. (63) 26 0039 ပန်းကန်အထူးအများပြည်သူဘတ်စ်ကား H ကို, လမ်းဆုံထူးချွန်မှာ IR အတွက်ခရိုင်Gökmeydan Sivrihisar2လမ်းဘတ်စ်ကားဘူတာရုံဦးဆောင်ခဲ့သည်။ အဘယ်သူသည် Osmangazi တက္ကသိုလ်လမ်းရထား-ဘတ်စ်ကားဘူတာရုံလေ့လာရေးခရီးများ၏အုပ်ချုပ်ရေးနှင့်အတူတိုက်မိ။ အဆိုပါမတော်တဆမှုမှာဘတ်စ်ကားခ Dudu (58) ရက်တွင်ခရီးသည်တင်အဖြစ်ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့သည်။ ...
အဆိုပါဓါးသွားဟာပြင်ပပြည်သူ့ဘတ်စ်ကားယာဉ်မောင်းမှာရပ်တန့် Download 27 / 09 / 2016 အဆိုပါပြည်သူ့ဘတ်စ်ကား Stop ပြင်ပယာဉ်မောင်းကသူ့ဓါးဖြင့် download: အရှင်လမ်းရထားလိုင်းကိုလမ်းကြောင်းအများပြည်သူဘတ်စ်ကားမောင်းသူများ၏စစ်ဆင်ရေးပြောင်းလဲနေတဲ့ Kocaeli, Izmit ၏ခရိုင်များတွင်ပြင်ပဝယ်လိုအားက၎င်း၏လေဖြတ်ဖြည့်ဆည်းရန်ပျက်ကွက်ခဲ့ပါသည်ရပ်တန့်နေတဲ့ခရီးသည်တို့ကဓားဖြင့်ထိုးခံခဲ့ရသည်။ အရှင်လမ်းရထားလိုင်းကိုလမ်းကြောင်းအများပြည်သူဘတ်စ်ကားမောင်းသူများ၏စစ်ဆင်ရေးပြောင်းလဲနေတဲ့ Kocaeli, Izmit ၏ခရိုင်အတွင်းရှိသူတစ်ဦးခရီးသည်ရပ်နားပြင်ပဝယ်လိုအားက၎င်း၏လေဖြတ်ဖြည့်ဆည်းရန်ပျက်ကွက်ခဲ့ပါသည်အားဖြင့်ဓားဖြင့်ထိုးခံခဲ့ရသည်။ လက်ခံရရှိသောသတင်းအချက်အလက်များအရ, 41 0488 J-ပန်းကန်အထူးအများပြည်သူဘတ်စ်ကားမောင်းသူ Sezer Y ကိုအရှင်လမ်းရထားလိုင်းကို၏လမ်းကြောင်းကိုပြောင်းလဲပစ်နေသည် Akdeniz ခရိုင် Pasha လမ်းအနုပညာလမ်း entry ကိုမှာအလုပ်လုပ်နေပါတယ်။ ကားမောင်းသူ Sezer Y ကိုလိုသောခရီးသည်များအနေဖြင့်ပြင်ပဝယ်လိုအားအတွက်အစား S ကို Osman ငြင်းခုံရပ်တန့် getirmeyince ...
Bursada အထူးပြည်သူ့ဘတ်စ်ကားကတ်စနစ်များအပိတ်များ 15 / 12 / 2016 Bursada အထူးပြည်သူ့ဘတ်စ်ကားကတ်စနစ်များပိတ်: ပုဂ္ဂလိကဘတ်စ်ကားအသစ်များအရှုပ်တော်ပုံမကြာခဏခရီးသည်များ၏ရိုင်းစိုင်းသည့်အပြုအမူနှင့်အတူတက် လာ. နှင့်ရာ၌အဆိုပါအရေအတွက်အားဖြင့်သတ်ဖြတ်ကားမောင်းသူ Bursa ၌ပါသောဆီကိုမီးရှို့ခြင်းအားဖြင့်ပတ်ဝန်းကျင် 10! ကြောင့်သဘောတူညီချက်ချိုးဖောက်ဖို့ကြုံတွေ့ပြဿနာတွေburulaş'lကဒ်စနစ်ကစနစ်ချွတ်ရေးသားခြင်းအားဖြင့် "ဒီ tools တွေကိုပိုက်ဆံအတွက်ရရှိနိုင်ပါ" အစိမ်းရောင်ဘတ်စ်ကားရပ်ဆိုင်း။ Bursalılarသားကောင်များအနေဖြင့်လယ်ပြင်ကနေBURULAŞလစဉ်ကြေးပေးသွင်းကဒ် Bursa တဲ့ Metropolitan မြို့တော်ဝန် Recep ၏နိုင်ငံသားများ task ကို Altepe'ye တောင်းဆိုခဲ့သည်။ Bursa အတွက်ပုဂ္ဂလိကဘတ်စ်ကားဆဲဥပဒအသိအမှတ်မပြုခဲ့ပါဘူး! ဆီဥနှင့်အစီအစဉ်များအပေါ်ပုဂ္ဂလိကခရီးသည်များ၏ယာဉ်မောင်းများ၏မကြာခဏရိုင်းစိုင်းအပြုအမူကိုမီးရှို့ခြင်းဖြင့်သတ်ပတ်ဝန်းကျင်၏နံပါတ်နှင့်အတူကျော်ကြားဖွစျလာသူ 10 ...
Sakarya ပြည်သူ့ဘတ်စ်ကား Tradesmen မင်္ဂလာသတင်း
Sakaryada အများပြည်သူဘတ်စ်ကား tradesmen ကောင်းသောသတင်း
ဓါတ်ရထားအရောင်းအပြီးနေကြတယ်, Akdeniz နစ်မြုပ်ကုန်သွယ်မှု
ပြည်သူ့ဘတ်စ်ကား Bursa အတွက်လမ်းရထားနှင့်အတူစုဝေးရောက်လာကြ၏
ပြည်သူ့ဘတ်စ်ကားဒဏ်ရာရနေတဲ့ရထားလမ်းမော်တော်ယာဉ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု9ဝင်တိုက်ခဲ့သည်
Eskişehirအတွက်ဓါတ်ရထားဘတ်စ်ကား Collider နှင့်အတူပြည်သူ့ 1 (ဗီဒီယို) ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့သည်
သတင်းများ Archive လကိုရွေးချယ်ပါ သြဂုတ်လ 2019 (369) ဇူလိုင်လ 2019 (637) ဇွန်လ 2019 (503) မေလ 2019 (525) ဧပြီလ 2019 (418) မတ်လ 2019 (520) ဖေဖော်ဝါရီလ 2019 (483) ဇန်နဝါရီလ 2019 (502) ဒီဇင်ဘာလ 2018 (620) နိုဝင်ဘာလ 2018 (504) အောက်တိုဘာလ 2018 (436) စက်တင်ဘာလ 2018 (517) သြဂုတ်လ 2018 (486) ဇူလိုင်လ 2018 (506) ဇွန်လ 2018 (580) မေလ 2018 (467) ဧပြီလ 2018 (545) မတ်လ 2018 (555) ဖေဖော်ဝါရီလ 2018 (500) ဇန်နဝါရီလ 2018 (557) ဒီဇင်ဘာလ 2017 (509) နိုဝင်ဘာလ 2017 (427) အောက်တိုဘာလ 2017 (538) စက်တင်ဘာလ 2017 (455) သြဂုတ်လ 2017 (505) ဇူလိုင်လ 2017 (479) ဇွန်လ 2017 (477) မေလ 2017 (494) ဧပြီလ 2017 (434) မတ်လ 2017 (540) ဖေဖော်ဝါရီလ 2017 (477) ဇန်နဝါရီလ 2017 (538) ဒီဇင်ဘာလ 2016 (487) နိုဝင်ဘာလ 2016 (631) အောက်တိုဘာလ 2016 (657) စက်တင်ဘာလ 2016 (541) သြဂုတ်လ 2016 (608) ဇူလိုင်လ 2016 (485) ဇွန်လ 2016 (661) မေလ 2016 (664) ဧပြီလ 2016 (700) မတ်လ 2016 (804) ဖေဖော်ဝါရီလ 2016 (855) ဇန်နဝါရီလ 2016 (751) ဒီဇင်ဘာလ 2015 (799) နိုဝင်ဘာလ 2015 (640) အောက်တိုဘာလ 2015 (624) စက်တင်ဘာလ 2015 (428) သြဂုတ်လ 2015 (493) ဇူလိုင်လ 2015 (505) ဇွန်လ 2015 (536) မေလ 2015 (577) ဧပြီလ 2015 (622) မတ်လ 2015 (1017) ဖေဖော်ဝါရီလ 2015 (878) ဇန်နဝါရီလ 2015 (1077) ဒီဇင်ဘာလ 2014 (963) နိုဝင်ဘာလ 2014 (826) အောက်တိုဘာလ 2014 (770) စက်တင်ဘာလ 2014 (598) သြဂုတ်လ 2014 (809) ဇူလိုင်လ 2014 (911) ဇွန်လ 2014 (735) မေလ 2014 (957) ဧပြီလ 2014 (972) မတ်လ 2014 (864) ဖေဖော်ဝါရီလ 2014 (720) ဇန်နဝါရီလ 2014 (733) ဒီဇင်ဘာလ 2013 (664) နိုဝင်ဘာလ 2013 (656) အောက်တိုဘာလ 2013 (548) စက်တင်ဘာလ 2013 (570) သြဂုတ်လ 2013 (533) ဇူလိုင်လ 2013 (661) ဇွန်လ 2013 (577) မေလ 2013 (734) ဧပြီလ 2013 (1059) မတ်လ 2013 (1102) ဖေဖော်ဝါရီလ 2013 (811) ဇန်နဝါရီလ 2013 (906) ဒီဇင်ဘာလ 2012 (911) နိုဝင်ဘာလ 2012 (1168) အောက်တိုဘာလ 2012 (830) စက်တင်ဘာလ 2012 (886) သြဂုတ်လ 2012 (976) ဇူလိုင်လ 2012 (863) ဇွန်လ 2012 (591) မေလ 2012 (445) ဧပြီလ 2012 (563) မတ်လ 2012 (699) ဖေဖော်ဝါရီလ 2012 (546) ဇန်နဝါရီလ 2012 (417) ဒီဇင်ဘာလ 2011 (149) နိုဝင်ဘာလ 2011 (35) အောက်တိုဘာလ 2011 (23) စက်တင်ဘာလ 2011 (18) သြဂုတ်လ 2011 (25) ဇူလိုင်လ 2011 (18) ဇွန်လ 2011 (16) မေလ 2011 (13) ဧပြီလ 2011 (13) မတ်လ 2011 (33) ဖေဖော်ဝါရီလ 2011 (24) ဇန်နဝါရီလ 2011 (13) ဒီဇင်ဘာလ 2010 (335) နိုဝင်ဘာလ 2010 (12) အောက်တိုဘာလ 2010 (15) စက်တင်ဘာလ 2010 (12) သြဂုတ်လ 2010 (16) ဇူလိုင်လ 2010 (9) ဇွန်လ 2010 (19) မေလ 2010 (6) ဧပြီလ 2010 (3) မတ်လ 2010 (62) ဖေဖော်ဝါရီလ 2010 (303) ဇန်နဝါရီလ 2010 (1838) ဒီဇင်ဘာလ 2009 (4) နိုဝင်ဘာလ 2009 (1) အောက်တိုဘာလ 2009 (3) စက်တင်ဘာလ 2009 (3) သြဂုတ်လ 2009 (2) ဇွန်လ 2009 (3) မေလ 2009 (2) ဧပြီလ 2009 (3) မတ်လ 2009 (9) ဖေဖော်ဝါရီလ 2009 (4) ဇန်နဝါရီလ 2009 (3) နိုဝင်ဘာလ 2008 (1) အောက်တိုဘာလ 2008 (1) စက်တင်ဘာလ 2008 (2) သြဂုတ်လ 2008 (1) ဇူလိုင်လ 2008 (2) ဇွန်လ 2008 (2) မေလ 2008 (2) ဧပြီလ 2008 (1) မတ်လ 2008 (3) ဖေဖော်ဝါရီလ 2008 (5) ဇန်နဝါရီလ 2008 (2) ဒီဇင်ဘာလ 2007 (2) အောက်တိုဘာလ 2007 (2) ဇူလိုင်လ 2007 (1) မေလ 2007 (1) ဧပြီလ 2007 (1) ဖေဖော်ဝါရီလ 2007 (2) ဇန်နဝါရီလ 2007 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2006 (1) အောက်တိုဘာလ 2006 (3) သြဂုတ်လ 2006 (1) ဇွန်လ 2006 (2) မေလ 2006 (2) ဧပြီလ 2006 (2) မတ်လ 2006 (2) နိုဝင်ဘာလ 2005 (2) သြဂုတ်လ 2005 (1) ဇွန်လ 2005 (1) မတ်လ 2005 (2) ဖေဖော်ဝါရီလ 2005 (1) ဇန်နဝါရီလ 2005 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2004 (1) အောက်တိုဘာလ 2004 (3) ဇူလိုင်လ 2004 (1) မေလ 2004 (2) ဒီဇင်ဘာလ 2003 (1) အောက်တိုဘာလ 2003 (1) မေလ 2003 (1) မတ်လ 2003 (1) ဖေဖော်ဝါရီလ 2003 (1) ဇန်နဝါရီလ 2003 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2002 (1) အောက်တိုဘာလ 2002 (4) သြဂုတ်လ 2002 (1) ဧပြီလ 2002 (1) မတ်လ 2002 (2) ဇန်နဝါရီလ 2002 (2) ဇူလိုင်လ 2001 (1) ဇွန်လ 2001 (1) မတ်လ 2001 (1) မေလ 2000 (3) မတ်လ 1999 (1) အောက်တိုဘာလ 1998 (2) မတ်လ 1998 (1) သြဂုတ်လ 1997 (1) အောက်တိုဘာလ 1996 (1) သြဂုတ်လ 1996 (2) မေလ 1995 (1) သြဂုတ်လ 1992 (1) မေလ 1990 (1)